FAQ - Beijing wakhuluma Technology Co., Ltd
Digital Pressure Kala
SPMK700 Pressure Kala
Intelligent Pressure Skena
SPMK223 Pressure Skena
ingcindezi comparator Pump
SPMK212C Air 0.4bar / 6psi
SPMK213B Air 6bar / 90psi
SPMK213H Air 40bar / 600psi
SPMK990S Water 600bar / 9000psi
SPMK990Y Amafutha 600bar / 9000psi
SPMK214L Amafutha 700bar / 10000psi
SPMK213J Amafutha 700bar / 10000psi
SPMK213K Amafutha 2500bar / 36000psi
Temperature Skena ...
SPMK313A lokushisa ...
SPMK313B lokushisa ...
51X inqubo Skena
SDP ingcindezi module
SPMK2000-1 Pressure adaptha
Izindaba & Exhibition
Yiliphi ithuluzi Samandla begodu khuyini okufanele siyenze?
Instrument Samandla ingenye izinqubo eyinhloko kusetshenziselwa ukulondoloza ukunemba yomculo. Isilawuli Samandla yinqubo ukumisa ithuluzi ukunikeza umphumela isampula ngaphakathi nohlu eyamukelekayo. Ukuyeka noma ukululaza izinto ezibangela izilinganiso olungalungile ukudumisa igama lakhe kuyisici eyisisekelo instrumentation design.
Mission yethu ukuhlinzeka high pressure kanye lokushisa Skena ukuze users.We kukhona nomkhiqizi professional ingcindezi kanye lokushisa Samandla insimbi engu-17 nakho e-China.
Samukela nokukhokhwa 100% TT kusengaphambili.
Uyini-akhawunti yakho yasebhange EFT?
Yomhlomuli Igama: Beijing wakhuluma Technology Co., Ltd
yomhlomuli sika Bank: Bank Industrial and Commercial of China Beijing Qinghe Idolobha Sub-legatsha
SWIFT IKHODI: ICBKCNBJBJM
Ingabe nomkhiqizi Samandla instument noma inkampani ukuhweba?
Beijing wakhuluma Technology Co., Ltd kuyinto nomkhiqizi professional ingcindezi kanye lokushisa Samandla izinsimbi China.We kuthiwa eyasungulwa ngo-1998 nge capital registerd eziyizigidi ezingu-33.8 Yuan.
Ingabe kokunikeza izitifiketi Samandla kanye imishini?
Ngokuvamile asikho isitifiketi Samandla ukuhlinzeka.
Uma udinga izitifiketi Samandla kusukela 3rd party ngeBeijing Ukulinganiswa Samandla Institute, kuyoba izindleko esingeziwe USD130.0.
Ukuze SPMK700 digital ingcindezi gauge, ungakwazi yini ukunikeza 0.05% FS ukunemba isikhathi esingaphezu 1000bar?
Ukuze ingcindezi uhla 1000bar noma ngaphezulu, singahlinzeka 0.1% yokunemba max.
Uma udinga 0.05% FS noma ukunemba ephakeme 1000bar nangaphezulu, intengo kuyoba ngaphezu USD6500.0.Because indaba of the inzwa ingcindezi kuyabiza kakhulu, okuyinto ehlukile njengoba impahla sisebenzisa. Ayikho umphakeli anganikeza 0.05% FS at 1000bar noma ngaphezulu ngesikhathi esinjalo amanani aphansi.
Ukuze kakhulu ingcindezi ububanzi esingaphansi 1000bar, singahlinzeka 0,025% FS, 0.05% FS futhi. Sicela unikeze uhla ingcindezi kanye nokunemba okudingayo, ngicaphuna wena intengo ngaleso sikhathi.